Goormee Ay Chelsea Ku Dhawaaqi Doontaa Frank Lampard? – Gool FM
Abdirashid Mohamud June 24, 2019
(London) 24 Juunyo 2019. Halyeyga kooxda Chelsea ee Frank Lampard ayaa markale kusoo laabanaya Stamford Bridge ka dib xilli ciyaareed qurux badan oo ku qaatay kooxda Derby County, waxaana uu beddel u noqonayaa Maurizio Sarri oo Juventus macallin u noqday.
Wararka ka imaanaya England ayaa sheegaya in Blues ay ku dhawaaqi doonto xiddiggeedii hore inuu noqonayo macallinka xiga ee kooxdan maamuli doono, waxaana lagu soo warramayaa in 48-da saac ee soo aaddan si rasmi ah loo xaqiijin doono Lampard inuu yahay tababaraha xiga ee Chelsea.
Milkiilaha kooxda ku guuleysatay UEFA Champions League-ga 2012, Roman Abramovic ayaa u oggolaaday macallinka Derby inuu siin doono ugu yaraan labo xilli ciyaareed, maadaama uu kooxda ay ka ganaaxantahay suuqa kala iibsiga.
Lampard ayaa ku wargeliyay Rams inuu doonayo ka tagista kooxda, waxaana labada koox meel wacan u maraya wada hadalka ku aaddan lacagaha mag-dhawga ah ee heshiiska macallinka lagu jebinayo.
41-jirkan ayaa caawiye ka dhiganaya Jody Morris, waxaana hadda uu kala shaqeeya Derby, wada jir ayayna ugu laabanayaan galbeedka London.
Super Frank ayaa horraan Chelsea u saftay 648 kullan, 13- xilli ciyaareed oo uu ku sugnaa Stamford Bridge, isagoo ugu dambeyn 2014 ka tagay Blues, waxaana uu noqday laacibka ugu goolasha badan Chelsea, 211 goolna u dhaliyay.
Laacibkii hore ee qaranka England ayaa isaga tagaya Derby, ka dib markii uu ku guuldarreystay inuu usoo dallaco horyaalka Premier League-ga, xilli Fiinaalihii Play-off ka kooxdiisa ay guuldarro kala kullantay kooxda Aston Villa.